ရတနာဝါသဘုရားကျောင်း 華緬 三寶寺: အားပေးစကား
လူတွေဟာ တစ်ခါတစ်ရံ စိတ်အားတွေ တက်ကြွပြီးနေတဲ့အခါမျိုးရှိတယ်။ သို့သော် တစ်ခါတစ်ရံ အခက်အခဲတွေနဲ့ ကြုံတွေ့နေရတဲ့အချိန်မှာ စိတ်ဓာတ်တွေ ဆုတ်နစ်သွားတတ်ကြတယ်။ ဒီလို စိတ်ဓာတ်တွေ ကျနေတဲ့အခါမှာ ၀ိုင်းဝန်းပြီးတော့ အားပေးစကားပြောကြရတယ်။
လူတွေ စိတ်ဓာတ်အကျဆုံးအချိန်ဟာ ဘယ်အချိန်လဲလို့ တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်တို့ သိဖို့လိုတယ်နော်၊ လူတိုင်းလူတိုင်း နောက်ဆုံးကြုံတွေ့ရမယ့် “တစ်နေ့သောအချိန်” ဆိုတာ ဘယ်အချိန်လဲ ? သေခါနီးအချိန်ပေါ့။ လူတိုင်းလူတိုင်း မရှောင်လွှဲနိုင်ဘူး၊ တစ်နေ့ကျတော့ ကြုံတွေ့ရမယ်ဆိုတဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်မှာ စိတ်အားအငယ်ဆုံး၊ စိတ်ဓာတ်အကျဆုံးအချိန်လို့ ဆိုလိုတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ ကျန်တဲ့သူတွေက ဘာလုပ်သင့်သလဲ၊ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တယ်ဆိုတာ ဘာတွေလဲ၊ ခုခေတ်မှာ ဘာတွေလုပ်နေကြလဲ၊ ဒါကို လေ့လာသုံးသပ်ပြီး ကြည့်ဖို့လိုတယ်၊ ကိုယ်လုပ်တဲ့ အလုပ်တွေဟာ မှန်ကန်မှု ရှိရဲ့လား၊ ခုခေတ်လူတွေ လုပ်နေကြတာ မှန်ကန်မှုရှိရဲ့လား၊ တကယ် “အားပေးစကား” ပြောတာ ဟုတ်ရဲ့လား၊ အားပေးစကားပြောတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ ချောက်တွန်း တာမျိုး ဖြစ်နေသလားလို့ စဉ်းစားဆင်ခြင်သင့်တယ်။ မစဉ်းစားဘဲလုပ်တဲ့ လုပ်ရပ်မှန်သမျှဟာ ကောင်းကျိုးချမ်းသာကို မပေးနိုင်ဘူး၊ အရာရာဟာ ပညာနဲ့ ဆင်ခြင်ပြီးတော့မှ လုပ်သင့်တယ်။
မြတ်စွာဘုရားက “အမျိုးသား ဥပါသကာ တစ်ယောက်ဖြစ်စေ၊ အမျိုးသမီး ဥပါသိကာမ တစ်ယောက်ဖြစ်စေ စဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ စဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက် နေမကောင်းထိုင်မသာဖြစ်လို့ အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်ရလောက်တဲ့ အချိန်အခါမျိုးမှာ အားပေး စကား ပြောရမယ်၊ ဆုံးမစကားပြောရမယ်” လို့ပြောတာ။ အဲဒီအချိန်မှာ စိတ်ဓာတ် အကျဆုံး၊ အားအငယ်ဆုံး ဖြစ်တတ်သည့်အတွက် အားပေးစကား ပြောဖို့လိုတယ်၊ ဒါကို လူတိုင်း လူတိုင်း တစ်နေ့မကြုံ တစ်နေ့တော့ ကြုံတွေ့ကြရမှာပဲ။
လူတိုင်း လူတိုင်း မွေးလာတဲ့ အချိန်ကနေစပြီး တစ်နေ့တစ်နေ့ ဘယ်ကိုသွားနေတာတုန်းဆိုရင် အိုခြင်းဆီ သွားနေတာ။ အိုခြင်းကနေ ဘယ်ကို သွားနေတာတုန်းဆိုရင် နာခြင်းဆီ သွားနေတာ၊ နာခြင်းကနေ ဘယ်ကိုသွားနေတာတုန်းဆိုရင် သေခြင်းဆီ သွားနေတာ၊ ဒါကြောက်စရာစကား မဟုတ်ဘူး၊ တချို့က သေစကားပြောရင် မင်္ဂလာမရှိဘူး နိမိတ်မရှိဘူး၊ ဒီလိုထင်တယ်၊ မသေမှာ ကျနေတာပဲနော်။
ကိုယ်ဘယ်ကို သွားနေတာတုန်းဆိုတာ သိဖို့မလိုဘူးလား၊ ကိုယ်ဘယ်သွားနေတယ်ဆိုတာ သိရမယ်၊ လူတွေက ပြောကြတယ် “ဘယ်မှ မသွားဘူး, အိမ်မှာနေတာ”။ သို့သော် အိမ်နေရင်း အသက်က ကြီးကြီး မသွားဘူးလား၊ ကြီးသွားနေတော့ ဘယ်သွားနေသလဲလို့ ထင်တုန်း၊ အိုတဲ့ဆီ သွားနေတာ၊ အိုတဲ့ဆီကနေပြီးတော့ နာတဲ့ဆီ မရောက်ဘူးလား၊ အေး နာတဲ့ဆီကနေ နောက် ဘယ်ရောက်သွားတုန်း။
ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးက ကမ္မဋ္ဌာန်း နှလုံးသွင်းခိုင်းသလိုပဲ၊ “ခံနိုင်ရင်ခံ မခံနိုင်ရင်သေ” ဆိုတာ၊ ဟုတ်တယ် မဟုတ်လား၊ အိုခြင်းဆင်းရဲ နာခြင်းဆင်းရဲကို ခံနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတဲ့အချိန်မှာ ခံနေပြီးတော့ မခံနိုင်တဲ့ အခြေအနေမှာ သေသွားတာပေါ့။ အဲဒီသေခြင်းဆင်းရဲနဲ့ လူ့ဘ၀ဟာ အဆုံးသတ်ကြရတယ်၊ မြတ်စွာဘုရားလည်း ဒီလိုပဲ အဆုံးသတ်တယ်၊ ရှင်သာရိပုတ္တရာ၊ ရှင်မောဂ္ဂလာန်တို့လည်း ဒီလိုပဲ အဆုံးသတ်တယ်။
သို့သော် အဆုံးသတ်ကလေးကောင်းအောင် လုပ်ပေးလို့ရတယ်။ လူတွေဟာ အဆုံးသတ် ကောင်းဖို့အတွက်၊ အသေကောင်းဖို့အတွက် အနေကောင်းဖို့ဆိုတာလည်း လိုအပ်တယ်လို့ ပြောကြတယ်နော်။ လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ် ဆိုတာက နောက်ဆုံးအချိန်ရောက်လို့ရှိရင် အားငယ် တတ်တယ်၊ ဒီလို အားငယ်လာလို့ရှိရင် အားပေးစကားပြောရမယ်။
လူတွေဟာ အနေတတ်ဖို့လိုသလို အသေတတ်ဖို့လည်း လိုသေးတယ်။ ဒါကြောင့် မြတ်စွာ ဘုရားက ဒီသုတ္တန်မှာ ဘာဟောထားသလဲဆိုတော့ “နေမကောင်းထိုင်မသာ ဖြစ်ပြီးတော့ ရောဂါ ဝေဒနာဖြစ်နေတဲ့ ပညာရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ကို ပညာရှိတဲ့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က အားပေး စကား ပြောသင့်တယ်” လို့ ဟောထားတယ်၊ ဒါ အကျိုးရှိလို့ပြောတာ၊ အားပေးစကား ပြောရမယ်။
မြတ်စွာဘုရားက အားပေးစကားပြောဖို့ ဒီသုတ္တန်မှာ သင်ပေးထားတယ်။ အားပေးစကား ပြောရမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုပြောမလဲ၊ ဒီနေရာမှာ သတိထားဖို့ရာက အားပေးစကားပြောတဲ့ သူကလည်း ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်ရမယ်၊ အားပေးစကားအပြောခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်း ပညာရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်ရမယ်၊ ဆင်ခြင်တုံတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်ရမယ်။ လူမိုက်ကိုသွားပြီး အားပေးစကား ပြောလို့ မရဘူး၊ လက်ခံချင်မှ လက်ခံမယ်၊ ပြောရင် “ငါမသေသေးဘူး၊ ငါသေမယ်ထင်လို့ လာပြောတာလား” ဆိုပြီး ရန်တောင်တွေ့လွှတ်လိုက်ဦးမယ်။
အဲဒီတော့ အားပေးစကားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်း ပညာရှိရမယ်၊ အားပေးစကား အပြောခံရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်း ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်။ ဒါကြောင့် မြတ်စွာဘုရားက “ပညာရှိတဲ့ ဥပါသကာ သည် ပညာရှိတဲ့ ဥပါသကာ နေမကောင်းထိုင်မသာဖြစ်နေရင် အားပေးစကား ဆုံးမစကားပြောပါ” လို့ ဟောတာ။ ဒီလို အားပေးစကားပြောလိုက်ရင် အကျိုးရှိတယ်။ ဘယ်လို အားပေးစကား ပြောရမတုန်းဆိုတော့ ဒီအချက်(၄)ချက်နဲ့ ပြောရမယ်။
လူဝတ်ကြောင်တွေကို ဘာပြောရမလဲဆိုရင် …
(၁) “မင်းမှာ ဘုရားအပေါ်မှာ အသိဉာဏ်နဲ့ နှစ်နှစ်ကာကာ ယုံကြည်တဲ့ သဒ္ဓါတရားတွေ ရှိနေတယ်၊ ဘာမှ ကြောက်စရာမလိုဘူး၊ စိတ်အေးလက်အေး နေနိုင်တယ်”။
“မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကို သိပြီးတော့ နှစ်နှစ်ကာကာ ယုံကြည်တဲ့သဒ္ဓါတရား မင်းမှာ ရှိနေရင် ဘာမှကြောက်စရာ မလိုဘူး၊ မကောင်းတဲ့ဘ၀ ဘယ်တော့မှ မရောက်ဘူး၊ အဲဒီသဒ္ဓါက ကယ်သွားလိမ့်မယ်၊ ဒါလေးအားကိုး” လို့ ပြောပါတဲ့။
ပညာရှိတဲ့သဒ္ဓါနှင့် ကိုးကွယ်ရမယ်ဆိုတာ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ ဂုဏ်တော်တွေ အာရုံပြုလိုက်၊ အရဟံ ဆိုပြီး နှလုံးသွင်းလိုက်၊ “တို့မှာ လောဘတွေရှိတယ်၊ ဒေါသတွေရှိတယ်၊ မောဟတွေရှိတယ်၊ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ စိတ်ထဲမှာ အဲဒီ လောဘ ဒေါသ မောဟ ဆိုတာ လုံးဝ မရှိဘူး၊ ဘုရားရဲ့စိတ်ဟာ ဖြူစင်လိုက်တာ”၊ ဟော - အရဟံ ဂုဏ်တော်ကို အာရုံပြုတဲ့ အခါမှာနော်၊
“ကိလေသာ အာသဝေါ တွေက လုံးဝကင်းနေလို့မြတ်စွာဘုရားက စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတာ မရှိဘူး၊ လောဘဖြစ်တယ်ဆိုတာ မရှိဘူး၊ မသိဘူးဆိုတာလည်း မရှိဘူး၊ လောဘ ဒေါသ မောဟ ကင်းတဲ့ ဘုရားပဲ။ ဒီလို လောဘ ဒေါသ မောဟတွေ ကင်းနေသည့်အတွက်ကြောင့် တစ်လောကလုံးမှာ နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက ဦးညွှတ်ပြီးတော့ ရှိခိုးထိုက်တဲ့ဘုရားပါလား” လို့ အရဟံဂုဏ်တော်ကို အောက်မေ့ပြီး ရှိခိုးပါ။ ဒီလိုကိုးကွယ်ပါ။
မဟာနာမ်မင်းကြီးကို မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ သုတ္တန်တစ်ခုမှာ “မဟာနာမ် မပူနဲ့၊ သီလနဲ့ ထုံမွှမ်းထားတဲ့စိတ်၊ သမာဓိစွမ်းအားတွေနဲ့ ထုံမွှမ်းထားတဲ့စိတ်၊ ပညာစွမ်းအားတွေနဲ့ ထုံမွှမ်းထား တဲ့ စိတ်ဟာ ဘယ်တော့မှ အောက်ကိုမကျစေဘူး၊ ဥပမာ ထောပတ်အိုးကြီးကို ရေထဲမှာ ခွဲလိုက်မယ် ဆိုရင် အိုးကွဲတွေက အောက်ကျသွားတယ်၊ ထောပတ်တွေကတော့ အပေါ်တက် လာမယ်။ ဆီအိုးကြီးကို ခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအိုးကွဲတွေက အောက်ကို ရောက်သွားပေမယ့် ဆီကတော့ ရေပေါ်တက်လာမှာပဲ”။
ဒီအတိုင်းပဲ ဘုရား ကြည်ညိုစိတ်ကလေးက အပေါ်တက်လာမှာပဲ၊ ဘာမှပူစရာ မရှိဘူး၊ ဒါကြောင့် အားပေးရမယ်။ “လူ့ပြည်က မကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို စွန့်ပြီးတော့ နတ်ပြည်ကိုသွား” လို့ အားပေးတယ်ဆိုတာ မြေအိုးကိုခွဲပြီးတော့ ရွှေအိုးကြီးကို ရယူတာပဲတဲ့။
(၂) နောက်တစ်ခုက “ဓမ္မေ အဝေစ္စပသာဒေန သမန္နဂတော” တဲ့၊ “ဘာမှအားမငယ်နဲ့၊ မင်းမှာ ဓမ္မအပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့ အသိဉာဏ်သက်ဝင်တဲ့ သဒ္ဓါတရားတွေ ရှိတယ်၊ ဓမ္မကို နှစ်နှစ်ကာကာ ယုံကြည်တယ်”၊ မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားသည် ဘယ်တော့မှ လွဲမှားတာ မရှိဘူး၊ ဒါ ဓမ္မရဲ့ ဂုဏ်တစ်ခုပဲ။
သွာက္ခာတော - မြတ်စွာဘုရားဟာ အကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့ ဆီလျော်အောင် ဟောထားသည့် အတွက် လွဲလွဲချော်ချော် တစ်ခုမှ မရှိဘူး။ သန္ဒိဋ္ဌိကော - ကိုယ်တိုင်ကျင့် ကိုယ်တိုင်သိနိုင်တဲ့တရား ဖြစ်တယ်။ အကာလိကော - အခုကျင့် အခုရတဲ့တရား ဖြစ်တယ်၊ ဧဟိပဿိကော - ကိုယ့်ရဲ့ မိတ်ဆွေသင်္ဂဟတွေကို လာပြီး လုပ်ကြည့်စမ်းပါလို့ ဖိတ်ခေါ်ထိုက်တဲ့ တရားမျိုးဖြစ်တယ်။ သြပနေယျိကော - အခုပဲ စိတ်ထဲမှာ နှလုံးသွင်း အခုပဲ စိတ်ချမ်းသာ သွားစေနိုင်တယ်။ ပစ္စတ္တံ ဝေဒိတဗ္ဗော ၀ိညူဟိ - ပညာရှိတွေဟာ အသီးသီး ကိုယ်ကျင့်လျှင် ကိုယ်ခံစားရတယ်တဲ့။
ဘုရား တရားတော်တွေရဲ့ဂုဏ်ရည်တွေကို ဒီလို နှစ်နှစ်ကာကာသိပြီး ယုံကြည်တဲ့ သဒ္ဓါတရားဟာ စိတ်ဓာတ်လေးကို ဖြူစင်စေတယ်တဲ့။ အဲဒီ ဖြူစင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်ကလေးဟာ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးက ဘယ်နေရာက မကောင်း ကောင်းကောင်း သူက ကောင်းတဲ့ဘုံကို ယူဆောင်သွားမှာပဲ၊ ဒါကြောင့် အားငယ်စရာ ဘာရှိလဲ၊ ဘာမှမရှိဘူး။
တစ်ချို့ဆိုရင် ဥပမာ - ခရီးသွားတယ်၊ ဟိုမှာ ဆွေမျိုးအရင်းအချာတွေ ရှိတယ်၊ ဒီအိမ်ကို ပိတ်ထားခဲ့ ပြီးတော့ ဟိုကိုသွားတယ်၊ ဟိုမှာလည်း ကိုယ့်ဆွေမျိုးတွေက ကိုယ့်ကို ကြိုနေမယ်လို့ သိလို့ရှိရင် အားငယ်မှု ဖြစ်ရဲ့လား? မဖြစ်ဘူး၊ ထို့အတူပဲ ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာ အားငယ်စရာဘာတစ်ခုမှ မရှိဘူး။
မြတ်စွာဘုရားက “ပုညာနိ ပဋိဂ္ဂဏှန္တိ” – “ကုသိုလ်တွေက ကြိုနေကြမှာ” တဲ့။ ဘယ်ဘုံကိုသွားသွား ကိုယ်လုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်တွေ ကိုယ့်ရင်ထဲနှလုံးထဲ စိတ်ဓာတ်ထဲမှာ ဖြူစင်ပြီးတော့နေတဲ့ ကုသိုလ် တွေက ကိုယ့်ကို ကြိုနေကြမှာတဲ့။ အဲဒါကြောင့် ဒီလို အားပေးစကားပြောရမယ်တဲ့။ အားပေးစကား ပြောရမှာက “ကိုယ့်မှာ အားကိုးစရာတွေ အများကြီးရှိတယ်၊ ဘာမှမပူနဲ့၊ ဓမ္မဟာ တကယ် အားကိုး စရာအစစ် ဖြစ်တယ်”။
(၃) သံဃေ အဝေစ္စပသာဒ၊ ထို့အတူပဲ အရိယာသံဃာတွေကို ကြည့်လိုက်၊ သုပ္ပဋိပန္နော - ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်း မှန်မှန်ကန်ကန် ကျင့်နေကြတယ်၊ ဥဇုပ္ပဋိပန္န - လမ်းစဉ်မှန်မှန်ကျင့်တယ်၊ သာမိစိပ္ပန္န - ဘယ်တော့မှ လွဲလွဲမှားမှာ မကျင့်ဘဲနဲ့ သင့်လျော်အောင်ကျင့်တယ်။ အကျင့် မှန်ကန် တွေကို ကျင့်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်၊ အာဟုနေယျ - အဝေးကပစ္စည်းတွေ ယူလာပြီးတော့ ပူဇော်ထိုက်တယ်၊ ပါဟုနေယျ - ဧည့်သည်တွေအတွက် သီးသန့်ထားတဲ့ ပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့ ပူဇော်ထိုက်တယ်၊ ဒက္ခဏေယျ - နောင်ဘ၀အကျိုးရဖို့ ရည်စူးလှူထိုက်တယ်၊
အဉ္ဇလိကရဏီယော - လက်အုပ် ချီထိုက်တယ်၊ အနုတ္တရံ ပုညက္ခေတ္တံ လောကဿ - လောကရဲ့ ကုသိုလ်ကောင်းမှု လုပ်စရာ လယ်မြေယာလို ဖြစ်တယ်တဲ့။ ကုသိုလ်ပင် ပျိုးချင်ရင် သံဃာမှာပဲ ပျိုးရတယ်လို့ ပြောတာနော်။
အဲဒီလို အားကိုးစရာ သံဃာပေါ်မှာ နှစ်နှစ်ကာကာ ယုံကြည်တဲ့သဒ္ဓါတရား ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ပူစရာ မလိုဘူး၊ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဒီမှာ ၀ိနည်းစာပြန်ပွဲကြီးတွေ ကျင်းပနေတယ်၊ ၀ိနည်းပြန်ဆိုနေကြတဲ့ သံဃာတွေကို လှူမယ်တန်းမယ်၊ လက်အုပ်လေးတစ်ကြိမ် ချီလိုက်မယ်၊ ဖျော်ရည်လေးတစ်ခွက် တိုက်မယ်၊ ရေလေးတစ်ခွက် တိုက်မယ်ဆိုရင် ကုသိုလ်တွေ မရဘူးလား၊ အများကြီးရတယ်နော်။
ဒီလို သံဃာကိုကြည်ညိုတဲ့ သံဃအဝေစ္စပသာဒဆိုတဲ့ ပညာနဲ့သဒ္ဓါတရားတွေ၊ ပညာနဲ့အသိရှိရှိ ယုံကြည်တဲ့ သဒ္ဓါတရားတွေ ကိုယ့်ရင်ထဲ နှလုံးထဲမှာ ရှိနေလို့ ဘာမှမပူနဲ့လို့ အားပေးစကား ပြောပါတဲ့။
(၄) နောက်တစ်ခု အားပေးစကားက “ဘာမှမပူနဲ့၊ စိတ်ထဲမှာ အားတင်းထား၊ မင်းမှာ ကိုယ်ကျင့် တရားတွေရှိတယ်၊ မင်းဘယ်တော့မှ ငါးပါးသီလ မဖောက်ဖျက်ဘူး၊ လုံခြုံတယ်၊ ဟိုတုန်းက မလုံခြုံ လျှင်လည်း အခု ဆောက်တည်လိုက်၊ အခု လုံခြုံသွားပြီ၊ ဟိုတုန်းက မလုံခဲ့ပေမယ့် အခုအိပ်ယာထဲ လဲနေတဲ့အချိန်မှာ ငါးပါးသီလ ဖောက်ဖျက်တာ ရှိသေးလား၊ ကိုယ့်မှာ သေငယ်ဇောနဲ့မျောနေတာ ခြင်လေးတွေ ဘာလေးတွေ သတ်နိုင်ဦးမလား၊ မသတ်လောက်တော့ဘူး၊ ငါးပါးသီလက ပြည့်ပြည့်၀၀ လုံလုံခြုံခြုံပဲ။
ပါဏာတိပါတ၊ အဒိန္နာဒါန၊ ကာမေသုမိစ္ဆာစာရ၊ မုသာဝါဒ၊ သုရာမေရယ ဆိုတဲ့ ဒီကံငါးပါးက လုံခြုံပြီးတော့ သီလဖြူစင်နေတယ်၊ အခုဆောက်တည် အခု ဖြူစင်နေတာ၊ မကောင်းတာတွေ ဘယ်လိုပဲလုပ်ခဲ့ လုပ်ခဲ့ ကောင်းတာတွေလုပ်တဲ့အချိန်ကစပြီး နှလုံးသွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် စိတ်ဟာ ကြည်နူးဖွယ်ဖြစ်တယ်။
ကိုယ့်သီလလေးကို ကိုယ်အာရုံပြု၊ တစ်ကြိမ်တစ်ခါတုန်းက ငါးပါးသီလကို ချိုးဖောက်ခဲ့ပေမယ့် ဒီအချိန်မှာ မချိုးဖောက်ဘူးလို့ နှလုံးသွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် နှလုံးသွင်းလိုက်တာနဲ့ ချက်ချင်း ကုသိုလ်က ဖြစ်လာတာ။
ရှင်အင်္ဂုလိမာလကြီးကို မြတ်စွာဘုရားက အင်္ဂုလိမာလပရိတ်ကို ဟောတဲ့အခါမှာ “ယတော’ဟံ ဘဂိနိ အရိယာယ ဇာတိယာ ဇာတော နာဘိဇာနာမိ သဉ္စိစ္စ ပါဏံ ဇီဝိတာ ဝေါရောပေတာ” အရိယာဇာတ်ဖြစ်တဲ့ ရဟန်းဘ၀ရလာတဲ့အချိန်ကစပြီး သေစေလိုတဲ့စိတ်နဲ့ ဘယ်သတ္တ၀ါမှ မသတ်ပါဘူးလို့ပြောတာ။
အရင်တုန်းက သတ်လိုက်တာ တကယ့်လူသတ်သမားကြီးပဲ၊ ပြီးခဲ့တာတွေကို ပြန်မတွေးနဲ့၊ ရဟန်း ဖြစ်တဲ့နေ့ကစပြီး ဘယ်သူ့မှ မသတ်တော့ဘူးဆိုတာမျိုးလိုပဲ။
သီလဟာအခုဆောက်တည်ရင် ဆောက်တည်တဲ့ အချိန်ကစပြီး “ငါ ငါးပါးသီလလုံတယ်” လို့ စိတ်ထဲမှာထား၊ အားတင်း၊ အရိယာတွေ မြတ်မြတ်နိုးနိုး စောင့်ထိန်းတဲ့ ဒီ ငါးပါးသီလ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ကျင့်ကြံကြိုးကုတ် အားထုတ်ပါ၊ သီလရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့် ဘာမှမပူနဲ့ အားတင်းထား၊ အဲဒီလို အားပေးစကား ပြောရမယ်။
ဒါဆိုရင် နေမကောင်းသူတစ်ယောက် စိတ်ကလေး ကြည်နူးမသွားဘူးလား၊ သူ့မှာ အားကိုး စရာတွေ ရှိတယ်ပေါ့၊ ဘုရားပေါ်မှာ ကြည်ညိုတဲ့ သဒ္ဓါတရားရှိတယ်၊ တရားပေါ်မှာ ကြည်ညိုတဲ့ သဒ္ဓါတရား ရှိတယ်၊ သံဃာပေါ်မှာ ကြည်ညိုတဲ့သဒ္ဓါတရားရှိတယ်၊ ငါးပါးသီလကို မြတ်မြတ်နိုးနိုး စောင့်ထိန်းထားတာရှိတယ်၊ တကယ်အားကိုးစရာတွေ မဟုတ်လား၊ ဒါက အားပေးစကားပြောတာ၊ ဒီလိုအားကိုးစရာတွေ ပြောပြပြီး သူ့ကိုဆက်ပြီးတော့ ပြောရမယ့်စကားလေးတွေ ကျန်သေးတယ်။
ဆက်ပြီး သူ့ကိုပြော၊ လူတွေဆိုတာ အတွယ်အတာလေးတွေ ရှိတတ်တယ်၊ ဥပမာ - မိဘတွေ ဆိုရင် သားသမီးအပေါ်မှာ တွယ်တာတယ်၊ အိမ်ထောင်ဦးစီးတွေဆိုရင် သားမယားတွေပေါ်မှာ တွယ်တာမယ်။
ဒီတော့ (၁) မိဘတွေပေါ်မှာ တွယ်တာတဲ့စိတ် ရှိသေးလား မရှိဘူးလား၊ မေး၊ ရှိနေသေးရင် အဲဒီ တွယ်တာတဲ့စိတ် မထားပါနဲ့၊ သတ္တ၀ါဆိုတာ ကိုယ့် ကံနဲ့ကိုယ်လာတာ၊ တွယ်တာပြီးနေလည်း သေမှာပဲ၊ မတွယ်တာဘဲနေလည်း သေမှာပဲ၊ သေမှာ အတူတူတော့ တွယ်မနေပါနဲ့လို့ ပြောရမယ်။
ဒါပေမယ့် ခုခေတ် အဲဒီလိုပြောရင် ရန်လုပ်နေမလား မသိဘူးနော်၊ မိဘပေါ်မှာ တွယ်တာတဲ့ စိတ်ရှိလည်း သေမှာပဲ၊ မိဘပေါ်မှာ တွယ်တာတဲ့စိတ် မရှိလည်း သေမှာပဲ၊ သေမယ့်အတူတူတော့ ဘယ်သူ့ပေါ်မှာမှ မတွယ်တာပါနဲ့လို့ ပြောပါတဲ့။
နောက်တစ်ခုက (၂) သားမယားတွေပေါ်မှာ တွယ်တာတဲ့စိတ် ရှိသလားလို့မေး၊ မေးတဲ့အခါ ရှိတယ် ဆိုရင်လည်းပြော၊ တွယ်တာတဲ့စိတ်ရှိလည်း သေမှာပဲ၊ တွယ်တာတဲ့စိတ်မရှိလည်း သေမှာပဲ၊ သေမည့်အတူတူတော့ ဘယ်သူ့အပေါ်မှ မတွယ်နဲ့၊ အားလုံး လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ် စိတ်ကို လွှတ်လိုက်ပါလို့ပြော။
စိတ်ရဲ့ အတွယ်အတာက တော်တော်ဆိုးတယ်၊ စိတ်တွယ်တာမှုကြောင့် ဒုက္ခရောက်တယ်၊ မြန်မာတွေကလည်း ပြောတတ်တယ်လေ၊ ခုနှစ်ရက်တိတိ အိမ်ပေါ်ကမဆင်းဘူးလို့ ပြောကြတယ်။ သေသူက မဆင်းလို့ ဘာလို့ လျှောက်ပြောကြတာပဲ၊ ဒါ အတွယ်အတာရှိရင်တော့ ဖြစ်တတ်တယ်။
(၃) ပစ္စည်းဥစ္စာတွေ တွယ်တာသလား၊ တွယ်တာမှုကို ဖြုတ်ရမယ်၊ တစ်ခုချင်း တစ်ခုချင်း ဖြုတ်သွားရမယ်၊ ဖြုတ်ကို ဖြုတ်ရမယ်၊ တွယ်တာမှုဆိုတာ အလွန်ဆိုးတယ်နော်။
ဒါကြောင့် အတွယ်အတာ မထားပါနဲ့လို့ ပြောပေးရမယ်၊ မတွယ်စေနဲ့နော်၊ တွယ်ရင် အိမ်ပေါ်က မဆင်းဘူးဆိုတာ ဟုတ်မယ်။ ပစ္စည်းလည်း မတွယ်စေနဲ့၊ ဘာမှမတွယ်ရဘူး၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း မတွယ်အောင် သတိထားရမယ်။ တွယ်တာမှုဆိုတဲ့ နိကန္တိ ဆိုတာ အလွန်ဆိုးတယ်၊ အတွယ်ရှိရင် သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်ဦးတော့ ဟိုအထက် မရောက်နိုင်ဘူး၊ တွယ်တယ်ဆိုတာ ဆွဲထားတာပဲလေ၊ ဆွဲထားရင် ဒီနေရာပဲ ပြန်လာမှာပေါ့။
(၄) ဖြစ်ရာ(ဘဝ) ကိုလည်း မတွယ်ပါနဲ့တဲ့၊ လူဆိုတာက အတွယ်အတာရှိတဲ့နေရာ ပြန်ပြန်ပြီးတော့ မွေးတတ်တယ်နော် သတိထား။ အတွယ်အတာ ရှိနေရင် အဲဒီမှာပဲ ပြန်ဖြစ်တတ်တယ်နော်။ အကုသိုလ်ကြီးကြီး မရှိဘူးဆိုရင်, ကုသိုလ်ကလည်း ကြီးကြီး မရှိဘူးဆိုရင် အဲဒီမှာပဲ ပြန်ဖြစ်တတ်တယ်၊ ဒါအတွယ်အတာရဲ့သဘော။
ဒါကြောင့် အတွယ်အတာကို တစ်ခုချင်း တစ်ခုချင်း ဖြုတ်ပါတဲ့။ မိဘပေါ် တွယ်တာတဲ့စိတ်၊ ငဲ့တဲ့စိတ် မထားပါနဲ့။ သားသမီးတွေပေါ် တွယ်တာတဲ့စိတ်၊ ငဲ့တဲ့စိတ် မထားပါနဲ့။ ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအပေါ်မှာ တွယ်တာတဲ့စိတ်၊ ငဲ့တဲ့စိတ် မထားပါနဲ့။ တဖြည်းဖြည်းချင်း တစ်စချင်း ဖြုတ်သွားလိုက်။ လူ့ဘုံ လူ့ဘ၀လည်း တွယ်တာတဲ့စိတ်၊ ငဲ့တဲ့စိတ် မထားပါနဲ့။ ဒီ့ထက်ကောင်းတဲ့အပေါ်မှာ ရွှေ့လိုက်စမ်းပါ။
လူ့ဘုံထက် စတုမဟာရာဇ်နတ်ဘုံက ကောင်းတယ်၊ လူ့ဘုံက အတွယ်အတာတွေကို ဖြုတ်လိုက်ပါ၊ လူပြန်မဖြစ်ချင်စမ်းပါနဲ့၊ နတ်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါ၊ ဟော - အတွယ်အတာက နတ်ပြည်ဘက် ရောက်သွားပြီ။ တစ်ခါ နတ်ပြည်မှာလည်း စတုမဟာရာဇ်နတ်ထက် တာဝတိံသာက ပိုချမ်းသာတယ်၊ တာဝတိံသာပေါ်မှာ အတွယ်လေးကို ရွှေ့လိုက်တယ်၊ တာဝတိံသာပေါ်တွယ်တဲ့ အတွယ်လေးကို တာဝတိံသာထက် ပိုကောင်းတဲ့နတ်ဘုံ ယာမာနတ်ဘုံ ရှိတယ်လို့ ယာမာနတ်ဘုံပေါ် တွယ်တာမှုက ပြောင်းမသွားဘူးလား။
နတ်ပြည်ခြောက်ထပ် တစ်ခုချင်း တစ်ခုချင်း ပြောင်းပြောင်းပြီး ကောင်းသည်ထက် ကောင်းတာတွေ ရွေးရွေးသွားလိုက်တာ နောက်ဆုံး ဗြဟ္မာ့ပြည်၊ ဗြဟ္မာ့ပြည်က ပိုကောင်းတာပေါ့၊ ကမ္ဘာချီပြီးတော့ အသက်ရှည်တယ်။ ဗြဟ္မာ့ပြည်ကိုတွယ်တဲ့ စိတ်ကလေး ပေါ်လာတဲ့ အခါကျတော့ သူ့ကိုလည်း ပြန်ဖြုတ်တယ်၊ ဗြဟ္မာ့ဘုံဆိုတာလည်း အသက်ရှည်ပေမယ့်လို့ မခိုင်မြဲဘူး၊ တစ်နေ့ကျရင် ပြောင်းလဲသွားဦးမှာပဲ၊ အပြောင်းအလဲ မရှိတာက သက္ကာယနိရောဓ ခန္ဓာကိုယ်ကြီး လုံးဝချုပ်ငြိမ်း သွားတဲ့ နိဗ္ဗာန်ပဲ။ အတွယ်အတာတွေ ဖြုတ်ဖြုတ်သွားပြီး နိဗ္ဗာန်ထိအောင် ပို့ပေးလိုက်တယ်။
အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာ တဒင်္ဂ တစ်ခဏအားဖြင့်တော့ နတ်ပြည်ရော ဗြဟ္မာ့ပြည်တွေရော ပထမ လိုချင် လာတယ်။ နောက်ဆုံး အဲဒီ လိုချင်မှု တွယ်တာမှုတွေ အားလုံးဖြုတ်ပြီးတော့ ခန္ဓာကိုယ်ကြီး ချုပ်ငြိမ်းတဲ့ နိဗ္ဗာန်ကို ပို့မပစ်လိုက်ဘူးလား။ ဒီတော့ သူ့စိတ်ကလေးဟာ အတွယ်အတာတွေ အားလုံးက လွတ်သွားတယ်၊ အတွယ်အတာလွတ်သွားတဲ့အခါ ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ စိတ်ဓာတ်မျိုးလို ဖြစ်သွားပါတယ်လို့ မြတ်စွာဘုရားက ဟောတယ်။
အတွယ်အတာတွေ တဖြည်းဖြည်း ဖြုတ်သွားလိုက်တာ နောက်ဆုံး နိဗ္ဗာန်ထိအောင် ရည်မှန်းချက် ရောက်သွားပြီးတော့ နိဗ္ဗာန်ရောက်ရှိသွားတယ်။ အဲဒီ တွယ်တာမှုတွေက လွတ်သွားတဲ့ အခုအခြေ အနေမျိုးနဲ့ ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ ကိလေသာအာသဝေါတွေက လွတ်သွားတဲ့ အခြေအနေမျိုးနဲ့ သွားမတူဘူးလား၊ တူတယ်နော်။
ရှစ်ပါးသီလဆောက်တည်တဲ့အခါတောင် မြတ်စွာဘုရားက “ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်များသည် သူ့အသက်ကို သတ်ခြင်းမှ ရာသက်ပန် ရှောင်တော်မူကြသည်၊ ငါလည်းပဲ ဒီကနေ့ သူများအသက်ကို သတ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်းဆိုတဲ့ ပါဏာတိပါတာ ဝေရမဏိသိက္ခာပုဒ်ကို ဆောက်တည်ထားတယ်၊ ဒီကနေ့ ငါလည်း ရဟန္တာလို ကျင့်ရလေပြီ” လို့ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ နှလုံးသွင်းဖို့ ဥပေါသထသုတ်မှာ ဟောထားတာရှိတယ်၊ အလွန်ကောင်းတဲ့စနစ်တွေပဲ။
“အဲဒါလိုပဲ အတွယ်အတာတွေကို တဖြည်းဖြည်းဖြုတ်သွားလိုက်တာ နောက်ဆုံး နိဗ္ဗာန် ရောက် သွားတယ်။ အဲဒီ နိဗ္ဗာန်ရောက်သည်ထိအောင် တွယ်တာမှု တွေက လွတ်ကင်းသွားတဲ့ စိတ်ဓာတ် လေးရဲ့ အနေအထားမျိုးလေးဟာ ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေ ကိလေသာ အာသဝေါတွေက လွတ်သွားတဲ့ အခြေအနေမျိုးလေးနဲ့ သွားတူပါတယ်တဲ့။ ဒီလိုထိအောင် အားပေးစကား ပြောပြီးတော့ မိတ်ဆွေ သင်္ဂဟတွေကို အချင်းချင်း ကူညီပေးပါ” လို့ မြတ်စွာဘုရားက သုတ္တန်မှာ ဟောလိုရင်း ဖြစ်တယ်။
ဒါကြောင့် တရားချစ်ခင် သူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းတို့သည် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ အင်မတန်အားငယ်နေတဲ့ အချိန်မျိုးမှာ “အားပေးစကား” ပြောရမယ်၊ နောက်ဆုံးနေ့အတွက် အားပေးစကား ပြောသလိုပဲ နေ့စဉ်လည်းပဲ အားပေးစကားပြောရမှာပဲ၊ နေ့စဉ်နဲ့အမျှလည်း “အိုနေတာ မပူနဲ့၊ နာနေတာလည်း မပူနဲ့၊ သေရမှာလည်း မပူနဲ့၊ ငါ့မှာဘာရှိတုန်း၊ ဘုရားကို ယုံကြည်တဲ့သဒ္ဓါတရားရှိတယ်၊ တရားကို ယုံကြည်တဲ့သဒ္ဓါတရား ရှိတယ်၊ ငါးပါးသီလငါလုံတယ်” လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရော အားမပေးထိုက်ဘူးလား၊ အားပေးစကား ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းပြော၊ သူတစ်ပါးကိုလည်း ပြောမိအောင်ပြော။
ဒါကြောင့် တရားချစ်ခင် သူတော်စင် ပရိသတ်တို့သည် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ဟောကြားတော်မူအပ်တဲ့ ဒီမဟာနာမသုတ်ထဲမှာလာတဲ့ “အားပေးစကား” ဆိုတဲ့ တရားကို လိုက်နာကျင့်သုံးပြီး အတွယ် အတာတွေ လုံးဝလွတ်မြောက်ကာ နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို ကိုယ်စီကိုယ်ငှ မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ ကုန်သတည်း။
ဒေါက်တာ အရှင်နန္ဒမာလာဘိဝံသ ၏
အားပေးစကား တရားတော် မှ ထုတ်နှုတ်ပူဇော်ပါသည်။
Posted by YATANAVASA at 12:14 PM